Inona no fomba fiompy? | Tontolo alika
Isika rehetra dia te hiaina miaraka amin'ny alika mahay mandanjalanja, saingy tsy dia tsapantsika fa noho izany dia mila manam-paharetana isika ary manokana fotoam-panofanana maromaro isan'andro manomboka amin'ny fotoana voalohany nahatongavan'ny namantsika mody. Raha tsy manao an'izany isika, rehefa mihalehibe, dia azo inoana kokoa fa mila ny torohevitry ny mpampiofana na ny fanampian'ny alika hafa isika.
Izany no antony ny fomba fiompiana dia safidy mety mahaliana. Fa inona no ahitana azy?
Ny olombelona, ​​na toy inona na toy inona fahaizantsika, dia tsy alika. Mifankahazo tsara izy ireo, hany ka mahatsikaritra haingana kokoa noho isika ny zavatra tsapany, ny zavatra eritreretiny ary, ho fanampin'izay, afaka maminavina ny fihetsiny na ny fihetsiny izy ireo. Rehefa manana amboa volom-borona isika izay, ohatra, tsy mahalala tsara ny fomba hifandraisany amin'ny alika hafa, ny alika mahay mandanjalanja dia tena hanampy., satria ho ohatra harahina.
Raha misy mpanazatra milaza amintsika ny fomba fiompiana omby, dia holazainy amintsika mazava tsara momba izany, hiditra amina alika misy olana amin'ireo hafa milamina. Araka izany, tsikelikely dia ho hitantsika fa ny volontsika dia mahazo ny fahaiza-manao ara-tsosialy ilaina hiaraha-miaina amin'ny alika hafa. Amin'izany fomba izany, ny zava-bita dia ny mahafinaritra kokoa ny diabe sy ny fotoana ankanesantsika any amin'ny valan'alika alika.
Ok izao Tokony ho raisina fa ny teoria milaza fa ny alika dia mety hanjakazaka na hanaiky dia nolavin'ny mpamorona ny tenany (azonao jerena ve ilay horonan-tsary eto). Marina fa miaina anaty vondrona ara-tsosialy izy ireo, mandrafitra ny alika izay andrin'ny tsirairay amin'izy ireo ary mitondra tena tahaka ny ataon'ny ray aman-drenintsika amintsika, fa tsy misy hafa.
Fa maninona no nolazaiko izany? SATRIA ny fomba fiompiana dia tena ilaina raha toa ka mampiasa teknika fiofanana tsara ny mpanazatra, izany hoe ny fanajana ireo biby; raha tsy izany dia mety hahatonga ny olana amin'ny fitondran-tena mety ho ratsy noho ny alikantsika io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Inona no fomba fiompy?